သာထက်အောင် ● လူရောင်စုံ၊ ဘဝရောင်စုံ၊ ဒုက္ခရောင်စုံ (၇) – MoeMaKa Burmese News & Media
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတယောက် ရန်ကုန်ကိုအလည်ရောက်ပြီး ရွှေတိဂုံဘုရား မရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ရန်ကုန်ရောက်ရ ကျိုးမနပ်သလို မန်းတလေးရောက်ပြီး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးကိုမဖူးခဲ့ရဘူးဆိုရင်လည်း ဆောင်ရွက်စရာဝတ္တရားကြီးတခုကျန်နေသလိုမျိုး ခံစားကြရမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဘုရားကြီးလိုက်ပို့ပေးဖို့ မောင်သန်းဝင်းကို ပူဆာရပါတယ်။ ဟိုတုန်းကနဲ့ စာရင် တော်တော်လေးသပ်သပ်ယပ်ယပ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘုရားအာရုံပြု ဘုရားပရဝုဏ်အတွင်း တပတ်လျောက်ကြည့်၊ ဓါတ်ပုံလေးဘာလေးအမှတ်တရရိုက်ပြီး ပြန်ဖို့ပြင်တော့ တနေရာသွားဖို့ကျန်သေးမှန်း စိတ်ကသိနေ တယ်။ အာရုံရိပ်ထဲမှာ တောင်သမန်အင်း၊ ဦးပိန်တံတား မယ်ဇယ်ပင်ရိပ်၊ တောင်လေးလုံးကျောင်း ဆရာတော်ဦးပညာ……အစီအရီ ပေါ်လာပါတော့တယ်။
၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ၂၉ တောင်လေးလုံးကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ လူထုဒေါ်ဒေါ်မာ မွေးနေ့ပွဲကို နေဝင်းမြင့်၊ ကိုယဉ်မင်းပိုက်တို့နဲ့ အတူနွှဲပြီးကတည်းက တခါမှပြန်မရောက်တော့။ ဦးပိန်တံတားရှေ့ ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက စိတ်ရှုပ်စရာ။ ဈေးသည်တွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေ၊ လူတွေ။ တံတားထိပ်ထိအောင်ဆိုင်ခန်းကြီးးတွေခင်းရောင်းနေတာရှိသလို တံတားပေါ် လူ သွားလမ်းပေါ်ထိ တက်ရောင်းတဲ့ဈေးသည်လေးတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။ စားဝတ်နေရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာမှာ အ လွယ်ဆုံးနဲ့ ငွေပေါ်အမြန်ဆုံးက ဈေးရောင်းတာဆိုတော့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ တခါ တခါ စိတ်ညစ်ဖို့လည်းကောင်း သနားဖို့ လည်းကောင်းတဲ့ ဈေးသည်ပြဿနာပါပဲ။ ဥပမာ … ကားကြို ကားကြားထဲဝင်ပြီး စပယ်ပန်းကုံးရောင်းတဲ့ဈေးသည်တွေ၊ ယာဉ်မောင်းရော ဈေးရောင်းတဲ့ကလေးရော အန္တရာယ်သိပ်များပါတယ်။ နောက်…ဘုရားတွေမှာ ဘုရားဖူးတွေစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လောက်အောင် ပန်းစည်းတွေ အတင်းထိုးရောင်းတဲ့ကိစ္စ။ သာမန်ကြည့်ရင် အသေးအဖွဲတွေလို့ထင်ရပေမယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွာရေးချွတ်ခြုံကျမှုနဲ့ စားဝတ်နေရေးကြပ်တည်းမှုတွေက ဘာစည်း ဘာဥပဒေကိုမှ သိပ်ဂရုစိုက်နေမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ခုလည်း ဦးပိန်တံတားဝန်းကျင်မှာ ဈေးသည်တွေနဲ့ပြည့်နေပါပြီ။ ဟိုတုန်းက ဒေါ်ဒေါ်မွေးနေ့ပွဲကြွရောက်လာတဲ့ စာ ရေးဆရာကြီးငယ်တွေ အစက်ကျရာ မယ်ဇယ်ပင်တန်းကလည်း ဈေးသည်တွေနဲ့ အညာရနံ့ မသင်းတော့။ ဦးပိန်တံတားကို လူသွားလူလာများလာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းဖို့၊ သဘာဝအလှမပျက်ဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေ ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ တံတား အလှနဲ့ အင်းအလှကြောင့် လူတွေလာကြတယ်ဆိုပေမယ့် ဦးပိန်တံတားမှာ သမိုင်းတန်ဖိုး၊ ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေ စိမ့်ဝင် နေတယ်ဆိုတာလည်း သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ တောင်လေးလုံးဆရာတော်သာရှိသေးရင် ဝင်ကန်တော့ပြီး ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ်လေးတွေ ပြောဖြစ်မှာ။ ခုတော့ စိတ်နဲ့ပဲ လှမ်းလက်အုပ်ချီရပါတော့တယ်။
နံနက်စောစာကို မန်းတလေးရောက်ရင် မစားမဖြစ် မုန့်တီနဲ့လဖက်ရည် သုံးဆောင်ပြီး မြင်းခြံလမ်းအတိုင်း ပုဂံညောင်ဦးကို ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ လမ်းဘေးတဖက်တချက်မှာ ထန်းပင်တွေက အစီအရီ။ တကယ့်အညာရှုခင်း။ တနေရာမှာတော့ ထန်း ရည်ရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ခနော်ခနဲ့လေးတခု ထန်းပလက်တဲတခုမှာ ချိတ်ထားတာ မောင်ကျော်လင်းက အကိုကြီး ဝင်တွယ်မ လားတဲ့။ မလုပ်ပါနဲ့မောင်ရာ..ထန်းရည်က အဆင်မသင့်ရင် ချက်ချင်းဝေါရှင်းတာ။ ညောင်ဦးကိုမွနုးမတည့်မီရောက်တော့ မောင်ကျော်လင်းက ပခုက္ကူဘက်သွားကြအောင်တဲ့။ ကျွန်တော့်အမှတ်သညာထဲမှာ ပခုက္ကူဆိုတာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလွန်ခက်တဲ့မြို့။ တခါမှလည်းမရောက်ဖူး။ အချိန်နည်းနေပြီ။ မသွားပါနဲ့ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ နာရီဝက်ဆို ပခုက္ကူရောက်ပြီ တဲ့။ ဟေ…. ဒီလိုဆိုလည်းသွားကြတာပေါ့မောင်ရာ..ဆိုတော့ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်း ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားထဲမှာ အရှည် ဆုံးဖြစ်တဲ့ (အနော်ရထာတံတား) ညောင်ဦး ပခုက္ကူမြစ်ကူးတံတားကို နာရီဝက်အတွင်းဖြတ်သန်းပြီး မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ပခုက္ကူအတွေ့အကြုံကို ကံကောင်းစွာရလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းနဲ့ကြီးပွားနေတဲ့ မောင်ကျော်လင်းညီတည်ခင်းတဲ့ နေ့လည်စာစားပြီး ပုဂံကိုပြန်လာကြပါတယ်။ ဟိုတယ် မှာခဏနား၊ ရေမိုးချိုးပြီး ပုဂံကိုတပတ်ပတ်ကြမယ်ဆိုတော့ နေတောင်စောင်းချင်နေပြီ။ ပုဂံကိုကျွမ်းတဲ့ယာဉ်မောင်းမို့ အချိန် တိုတိုအတွင်းမှာ ဘုရားစုံကို ပုဆိန်ပေါက်ဖူးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါက ရွှေစည်းခုံ၊ ဒါက လောကနန္ဒာ၊ ဒါက ရွှေဂူကြီး၊ ဒါက မနူဟာ ဘုရား၊ ဒါက မြစေတီ…. ပန်းခင်းကို မြင်းစီးကြည့်တာကမှ အပွင့် အရွက် အခက် စုံစုံလင်လင်မြင်ရဦးမယ်။ ခုတော့ ပုဂံလို စေတီပုထိုးပေါင်း မြောက်များစွာကို ရသမျှအချိန်တိုအတွင်း တက်သုတ်ရိုက်ရတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်ရပါတယ်။
ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီး အမောပြေ တခွက်တဖလားချမလို့ကြံကာရှိသေး ဖုန်းကမြည်လာပါတယ်။ ဖုံးကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ငယ်သူငယ်ချင်း တိုးမြင့်။ မင်းဘယ်ရောက်နေတုန်းဆိုတော့ ငါပုဂံမှာ။ အေး အေး ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်နော်..သတိ ရလို့ဆက်တာပါ.. ဒါပဲ။ သြော်… သူငယ်ချင်းတိုးမြင့်.. ငယ်သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် သံယောဇဉ်အကြီးရှာသား။ သူနဲ့ ကျွန် တော် ကုန်းဇောင်းကျောင်းမှာ လေးတန်းအထိအတူနေခဲ့ဖူးတယ်။ ၄ တန်းအောင်လို့ ဆင်ဖြူကျွန်းပြောင်းသွားကတည်းက သူနဲ့ပြန်မတွေ့တော့။ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်မှာနေမှန်းလည်းမသိ။ တနေ့.. ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဟောပြောပွဲဂုရုကြီး မန်းတလေး မှာကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ နေဝင်းမြင့်နဲ့ ဖုန်းပြောဖြစ်တော့မှ တိုးမြင့်ရွှေဘိုနေကြောင်း၊ အစိုးရရှေ့နေက ပင်စင်သွားပြီး၊ ခု ရှေ့ နေလိုက်နေကြောင်း မကြာ မကြာ မန်းတလေးကိုလာတတ်ကြောင်းသိရပြီး၊ သူ့ဆီကဖုံးနံပါတ်ရတာနဲ့ ချက်ချင်းဆက် လိုက်တာ ကံကောင်းချင်တော့ သူနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ပါတယ်။ ရီတော့ ရီရတယ်။ အသက် ၇ဝ နားနီးမှ ဟေ့ကောင် မင်းငါနဲ့ အပြောခံရတော့ သူလည်း ကြောင်စီစီဖြစ်နေပုံရတယ်။ ငါဘယ်သူပါလို့ ကျောင်းနာမည်ပြောတော့လည်း သိသလို မသိ သလို၊ ကလောင်နံမည်ပြောတော့လည်း အူကြောင်ကြောင်..။ ဒါနဲ့မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ငယ်နာမည်ပြောလိုက်တော့မှ ဝမ်း ခေါင်းသံကြီးနဲ့… ဟာ သူငယ်ချင်း ဝမ်းသာလိုက်တာကွာ။ မင်း အခုရန်ကုန်မှာလား … ငါဆင်းလာခဲ့မယ်လုပ်နေလို့ မဟုတ် ဘူး ငါ အခုသြစတြေးလျကဆက်နေတာ။ ဒီဇင်ဘာမှ ငါအလည်ပြန်ဦးမှာဆိုတော့ ရန်ကုန်ရောက်ရင် ဖုန်းဆက်လိုက် ငါ ဆင်းလာတွေ့မယ်တဲ့။ မန်းတလေးရောက်လို့ ဖုန်းဆက်လိုက်တော့ သူချက်ခြင်း ရွှေဘိုကဆင်းလာပါတယ်။ ငယ်သူငယ် ချင်း ၂ ယောက်တွေ့ဆုံပုံက စစ်အတွင်းကွဲကွာသွားတဲ့ တောင် ..မြောက်ကိုရီးယားအမျိုးတွေဆုံပုံထက် ဆိုးပါတယ်။ က လေးဘဝကကွဲသွားတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း၊ အသက် ၇ဝ နားနီး အဘိုးကြီးဖြစ်မှပြန်ဆုံကြမှာဆိုတော့ ချိန်းမထားပဲ လမ်းမှာ များ မတော်တဆတွေ့ခဲ့ရင် မှတ်မိကြမယ်မထင်။ ခုလည်း ကျွန်တော်တည်းခိုရာ ၈၄ လမ်းကို သူ့သားကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုလို့ တိုက်ခန်းပေါ်ကဆင်း သူ့ကိုမျှော်နေတုန်း တအောင့်လောက်ကြာတော့ ကားပေါ်က အသားညိုညို အညာသားရုပ် လုံချည်ဘိုသီဘတ်သီနဲ့ အဖိုးကြီးတယောက် ကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးလာတာတွေ့ရပါတယ်။
“ကိုင်း…ခရီးဆက်ကြစို့၊ အောက်ဆိပ်ကတပည့် မအေးကလည်း ဆရာဘယ်ရောက်နေပြီလဲ.. ဖုံးတဂွမ်ဂွမ်ဆက်နေပြီ။ ချောက်ရောက်မှပဲ နေ့လည်စာစားကြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ ပုဂံညောင်ဦးရောက်လို့မှ ပုန်းရည်ကြီးမဝယ်ရင် တာဝန်မ ကြေရာကျပေမပေါ့။ ပုန်းရည်ကြီးနဲ့ သုံးထပ်သားဆီပြန်ကို အတို့အမြှုပ်လေး၊ ငြုတ်သီးဆားထောင်းလေးနဲ့များ စားလိုက်ရ ရင် ဘယ်အညာသားမှ ခေါင်းမဖေါ်နိုင်ဘူး။ ချောက်ရောက်တော့ မွန်းတည့်ပြီ။ ခု အမေရိကားရောက်နေတဲ့ အောက်ဆိပ် ကျောင်းမှာ အတူကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းခင်မောင်အေး နှမများနဲ့ သူ့သားသမီးတွေ ခဏဝင်နှုတ်ဆက်ပြီး ထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းရှာပုံတော်ဖွင့်ကြပါတော့တယ်။
← လင်းသက်ငြိမ် ● မဟာဂီတ
မောင်အောင်မွန် ● ကျွန်တော်တွေးမိသလိုရေးပါမည် (၄ဝ၇) (မိုးမခ) ဧပြီ ၆၊ ၂ဝ၁၉ →